‘विप्लव समूहको समस्या यसरी समाधान गरौं’
डोटी । नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहको समस्यालाई सरकारले वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । मङ्गलबार नेपाली काङ्ग्रेस डोटीले आयोजना गरेको आमसभामा नेता पौडेलले देशमा
रगत होइन, पसिना बगाऊँ : मुख्यमन्त्री पौडेल
हेटौँडा । प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले देशलाई अविकास, पछौटेपन र गरीबीको दुष्चक्रबाट उन्मुक्त बनाउँदै स्वाधीन, समुन्नत र समृद्ध देशको रूपमा स्थापित गर्न अबको पुस्ताले श्रम र पसिना
राज परम्पराको अन्त्य गर्दै उदाएको गणतन्त्रको उपलब्धि के ?
चिप्लेढुङ्गा । नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको ११ वर्ष पुगेको छ । जनआन्दोलन २०६२/६३ को जगमा भएको निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक
गणतन्त्र दिवसमा कांग्रेसको यस्तो शुभकामना सन्देश
काठमाडौं । नेपाली काङ्ग्रेसले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा शुभकामना व्यक्त गरेको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आज शुभकामना सन्देशमा गणतन्त्र दिवस–२०७६ का
‘कम्युनिस्ट र कांग्रेसको विकल्पमा समाजवादी पार्टी स्थापना भएको हो’
वीरगन्ज । पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् समाजवादी पार्टी संघीय परिषदका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले केही समयमै समाजवादी पार्टीले हिमाल, पहाड, तराईका जनतालाई डोर्याएर वैकल्पिक शक्तिको रुपमा स्थापित हुने बताएका छन् ।
सुमार्गीको पैसाको वैधानिकता ६ महिनाभित्र टुंगो लगाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मुक्तिश्री सिमेन्टका सञ्चालक अजेयराज सुमार्गीको नाममा विदेशबाट आएको ८० करोडभन्दा बढी रूपैयाँको वैधानिकता टुंगो लगाउने जिम्मा सरकारलाई दिएको छ । सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र रकमको वैधानिकताको टुंगो लगाउन
सत्तारुढ सांसदको सरकारलाई : प्रश्न- बुढीगण्डकी आयोजना किन अघि बढेन ? (भिडियोसहित)
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदहरुले नै बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढाउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । सांसदहरु राधा ज्ञवाली, भूमिप्रसाद त्रिपाठी र पाल्देन छेपाङ
नेतृत्व तहको छिनाझप्टीले देशको विकास हुन सकेन : प्रचण्ड (भिडियोसहित)
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनतालाई भड्काउने छुट कसैलाई पनि भएको बताएका छन् । काठमाडौंमा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले मुलुकको ईतिहास र प्रकृतिले दिएका
अष्ट्रियाको जलविद्युत प्रविधि भित्र्याउन समझदारी : ऊर्जामन्त्री पुन (भिडियोसहित)
काठमाडौं । नेपाल र अष्ट्रियाबीच जलविद्युत पूर्वाधार प्रविधि सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले भ्रमणको क्रममा गत जेठ ८ गते अष्ट्रियाको राजधानी भियनामा
अब बारुदको गन्ध आवश्यक छैन : मन्त्री बाँस्कोटा
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मुलुकमा अब बारुदको गन्ध आवश्यक नभएको बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री बाँस्कोटाले यस्तो बताएका हुन् । नेपालमा जनताको